We She Me: ကုက္ကိုင်းက ကော်ကြော်
Tian - 7/10/07, 2:46 PM
Dear Ko Andy and family,
I frequently visit your nice blog. I really like your writing and do appreciate your effort as well.
As far as I remember, my sister is also good at this kind of snack. She adds some bean sprouts and small prawns (Pa zun seit in Burmese). Hope your mom will try on such additional ingredients next time.
Please carry on and I love to study your family experience.
Andy Myint - 7/10/07, 3:26 PM
ဟုတ်တယ်.. ဟုတ်တယ် .. Seafood (ပုစွန်၊ ကင်းမွန်)ပါ ထည့်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်မှ အကြံပေးသလို ပဲပင်ပေါက်ပါ ထည့်ပြီး လုပ်စားဦးမယ်။ ဘိတ်(မြိတ်) စတိုင်ပေါ့။ Many thanks for your comment & tip, Ko Tian…
Thiha Kyaw Zaw - 7/11/07, 4:31 AM
Kaw Kyaw from 20th or 21st street of China Town is awesome. You should try it when you get back to YGN.
Andy Myint - 7/11/07, 10:50 AM
Cool... I will put it in my list.
TMH - 7/12/07, 4:29 AM
Phyo Wai Kyaw - 7/12/07, 1:55 PM
သွားရည်တောင်ကျလာပြီ။ Hokkien လို အိုဝါးကျန်း လို့ခေါ်တယ်ဗျ... "အို" ဆိုတာက ဂဏန်းတဲ့.. ပြောကြတာပဲ.. ဂဏန်းကော်ကြော်ပေါ့။ ရန်ကုန်က အဒေါ့် ကိုတောင်သတိရတယ်။ သူကြော်တာကလည်း တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်။ ကြည်ကြည်တွဲတွဲလေး။ လုပ်နည်းကတော့ ဆင်သလိုလိုနဲ့ မတူဘူးဗျ။
ဘာညာ - 7/14/07, 1:51 PM
ဟိုနေ့တုန်းကတောင် တရုတ်တန်းမှာ ဂဏန်းကော်ကြော် သွားဝိုက်လာသေးတယ်..။ နောက်ပြီးတော့ ခရုကော်ကြော်လည်းရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါတော့ မစားဘူးဖူး။ အဲ့မှာ အကြွပ်ကြော်ရယ် အပျော့်ကြော်ရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတာ။ ကိုအန်ဒီလုပ်စားတာအကြွပ်ကြော်ဖြစ်မယ်။ ကိုဖြိုးဝေကျော်ပြောတာတော့ အပျော့်ကြော်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာပဖြစ်ဖြစ် ၂ မျိုးလုံးကိုကြိုက်တယ်။ ကွိကွိ
Anonymous - 7/15/07, 8:55 PM
ိစားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ.. ဗိုက်စာတယ် ။ မားသားကို ဒီပို့စ် ပရင့်လုပ်ပြီး ပူစာရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ် ။
ThuHninSee - 4/21/08, 7:38 AM
စင်ကာပူမှာ ၆နှစ်နေလာပေမယ့် တစ်ခါမှမစားဖူးဘူး။
စကားမစပ်..ယူအက်စ်မှာ အသဲအမြစ်တွေရတယ် ကိုအန်ဒီ။
Andy Myint - 4/22/08, 12:18 AM
ဟုတ်တယ် ညီမ သုနှင်းဆီ .. စင်္ကာပူမှာ ဒါမျိုမတွေ့မိဘူး။ ဂဏန်းနဲ့ ကော်နဲ့ ကြော်ထားတာတော့ တွေ့မိဖူးတယ်။ US မှာ အသည်း အမြစ်ရတယ်ဆိုတာ တရုတ်ဆိုင်မှာလား။ Wall Mart မှာတော့ မရလောက်ဘူး ထင်တယ်။ သြော်ဇီမှာလည်း အလွယ်ရနိုင်တယ်။ ကြက်သားဆိုင်တိုင်းလိုလို ရောင်းတယ်။
ThuHninSee - 4/22/08, 12:31 PM
Winco မှာပါ ကိုအမ်ဒီ။
KMA - 7/22/08, 8:56 AM
ဖြိုးဝေကျော်ရဲ့ကွန်းမင့်က ကော်ကြော်ကို အိုဝါးကျန်း လို့ခေါ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အို-ဆိုတာ oyster (ကမာကောင်)ကို ဖူးကျန့်(လက်ရှည်)တရုတ်လို ခေါ်တာပါ၊ ဂဏန်းကိုခေါ်တာ မဟုတ်ရပါ၊ ရန်ကုန်မှာ ကမာကောင်ထက် ဂဏန်းက အရလွယ်လို့ အစားထိုးတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။